Ciidamada Puntland oo gaaray magaalada Hadaaftimo – Radio Daljir
Noofember 12, 2017 12:05 g 4
Ciidamada Puntland ayaa gaaray magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, waxaana ciidamadan ay shalay ka ambabaxeen magaalada Bosaso kuwaasi oo ka hortgaya sanaadiiqda doorashoyinka Somaliland in la keeno deegaamadaasi oo Puntland katirsan.
Sidoo kalle xalay ayaa waxaa gaaray magaalada Baran ee gobolka Sanaag wasiirka amniga Puntland Cabdilaahi Yuusuf Dawlad iyo wafdi uu hogaaminayo.
Puntland ayaa horay u sheegtay inaanay ogolaan doonin deegaamada ay maamusho in laga qabto doorasho, waxaana sidoo kalle arrintan go’aan kasoo saaray baarlamaanka Puntland oo u sheegay dowladda inay difaacdo xuduudaheeda.
Shacabka magaalada Baran ee gobolka Sanaag oo soo dhoweeyey wasiirka amniga Puntland ayaa sheegay inaanay aqbali doonin doorashooyinka Somaliland in laga qabto deegaamadooda.
Guulaysta geesiyadiipuntland cadawgeenagooya guuliyo hormarjoogto ah baan urajaynayaah efemka daljir iyo waliba suxufiyiinta firfircoon eekahawlgala mnshalh
Jaamac Mohamoud 10 months
guulasta masha allaah
Khadra Ali Ali 10 months
Mohamed Kaafi 10 months